Kana iwe uchida kuziva nezve Fedora Linux, kune nzira dzinoverengeka dzekuyedza.
Nzira iri nyore isingakanganise yako yazvino yekushandisa system ndeye gadzira inorarama USB yeFedora.
Imwe nzira yekuyedza Fedora, ndeyokuwana mukana wehunyanzvi hwekugadzira kuburikidza nekuisirwa muVirtualBox. Nenzira iyi, iwe unoshandisa Fedora senge chishandiso pane yako yazvino inoshanda sisitimu.
Nenzira iyi, iwe unogona kuita kunyatso kuyedza pasina kukanganisa yako yazvino inoshanda sisitimu.
Unogona kuteedzera yako chaiyo setup uye woisa zvakare pane imwe system. Zvinonzwika zvinobatsira? Rega ndikuratidze maitirwo azvo.
Kuisa Fedora muVirtualBox
Ngatione nhanho dzekuisa Fedora Linux muOracle VirtualBox.
Nhanho 1: Isa VirtualBox
Kana usati watoisa VirtualBox pane yako system, unogona kuikanda kubva kune yepamutemo webhusaiti. Unogona kuwana rairo ye Windows, Mac OS uye Linux. Vashandisi veUbuntu vanogona kureva izvi zvakadzidziswa dzidziso pakuisa VirtualBox.
Nhanho 2: Dhawunirodha Fedora ISO
Kana iwe usiri kujairana nefedora, pane mashoma mifananidzo kuti uzive.
Fedora IoT ichave inoshandiswa kune scalable zvivakwa, Fedora nzvimbo yekushandira mufananidzo une seti yezvishandiso yakanangidzirwa kudesktop muvanilla GNOME desktop nharaunda uye Fedora server sekuratidzwa kwezita rayo, rakagadzirirwa sevha kana dhata nzvimbo.
Kana GNOME isiri yako yekutanga sarudzo, unogona kurodha pasi vhiririka yeFedora desktop ine imwe nzvimbo desktop desktop. Kune ino dzidziso, ini ndakasarudza Fedora 33 pamwe neGNOME desktop nharaunda.
Nhanho 3: Gadzira isina chinhu muchina uye uigadzirise
Fedora inoda mashoma e20GB disk space & 2GB RAM, kuisa uye kumhanya zvinobudirira. Kunyangwe zvakapetwa izvo zviyero zvinokurudzirwa kuti zvive nyore mushandisi ruzivo. Kubva pane izvo ini ndichagadzira uye ndigadzirise iyo chaiyo muchina.
Tanga Virtual Bhokisi uye tinya paNew.
Gadzira mutsva mutsva
Iyo yakakosha sarudzo yekuteerera, ndiyo Type kuti isetwe kuLinux uye iyo vhezheni kuna Fedora (64-bit). Kana iwe ukatanga kutaipa Fedora pazita Prompt, VirtualBox inozongotorera chaiyo marongero ako. Kunyangwe zita racho risingafanire kuve Fedora, inogona kuve chero chaunoda.
Kana iwe uine mukana we32-bit vhezheni chete, iwe unofanirwa kugonesa kugona kwehunyanzvi paBIOS, kana iwe uine AMD CPU inonzi SVM. Chakaipisisa-chiitiko ndechekuti yako CPU haitsigire tekinoroji yehunyanzvi. Kana iwe usina chokwadi, tarisa izvi kutanga.
Paunenge uchinge uine marongero akafanana neni, tinya pane bhatani rekugadzira.
Tumidza zita rako VM uye ugozvipa kanokwana 3 GB RAM
Sezvambotaurwa, iwe unoda ingangoita 20 GB yediski nzvimbo kuti ugone kuisa Fedora. Ndine 32 GB ye RAM pane yangu system saka ndakagadza 8 GB pano. Iwe unofanirwa kuve wakanaka ne3 GB ye RAM.
Izwi pamusoro pekushandisa RAM, iyo RAM inongodyiwa nemuchina chaiwo paunenge uchimhanya. Zvikasadaro, ichave ichiwanikwa kuti ishandiswe nguva dzose.
Ita shuwa kuti mamwe ese marongero anoenderana nemuenzaniso uye tinya Gadzira.
Govera 15-20 GB yediski nzvimbo muVDI fomati
Usati wabaya bhatani rekutanga remuchina wako chaiwo, unofanirwa kurodha iyo ISO sezvakaratidzwa pazasi [Optical Drive].
Wedzera iyo Fedora ISO kune optical drive yekuchengetedza
Sezvo yako chaiyo dhiraidhi isina chinhu, iyo chaiyo muchina ichatanga kubva kune ino ISO. Funga nezvazvo sekushandisa inorarama USB kana diski yekuisa Linux.
Enda kuZvirongwa uye wedzera ISO se optical drive
Zvino, kana iwe uine yakawanda-musimboti CPU inokurudzirwa kugovera maviri kana mamwe macores emuchina wako chaiwo. Iwe unogona kuwana iyo CPU cores pasi peiyo system tab. Paunogadzira yako system tinya ok uye tanga iwo chaiwo muchina.
Inesarudzo nhanho: Govera huwandu hweCPU cores
Paunenge iwe wagadzirisa zvese, tinya pane yekutanga bhatani kuti utange kuisirwa.
Nhanho 4: Isa Fedora muVirtualBox
Kana iwe watevera maitiro nenzira kwayo, kana iwe ukatanga iyo chaiyo muchina iwe unozobhuya zvakananga kubva kuIO faira. Paunoona yakafanana pazasi pechidzitiro sarudza Start Fedora, uye tinya yekupinda kiyi.
Fedora inomhanya munzvimbo yekurarama mumuchina chaiwo
Kutanga iyo yekuisa dialog bhokisi, tinya paIisa kune Hard Dhiraivha.
Dzvanya pa "gadza kune hard drive"
Usati waenderera mberi nekumisikidza, zvakakosha kuti utsanangure mamaki ebhodhi, yako nguva yenguva uye pakupedzisira panogadziriswa sisitimu inoshanda.
Sarudza keyboard, nguva uye zuva uye wozoenda kuInstitute Destination
Iyo yekuparadzanisa maitiro yakatwasuka kumberi. Iwe wakagadzira imwe yemahara nzvimbo seVDI pakutanga. Inofanira kuzivikanwa otomatiki.
Sarudza diski yako woisa yekumisikidza yekumisikidza otomatiki. Dzvanya paDone kuti uende kune yapfuura dialog bhokisi.
Dhisiki rinofanira kuzivikanwa otomatiki
Paunenge iwe wagadzirisa zviri pamusoro, tinya pane "Kutanga Kuisa".
Kutanga kuisirwa Fedora
Iye zvino iwe unongoda kumirira mashanu-matanhatu maminetsi kuti kumisikidza kupedzisa. Dzvanya pane bhatani "Pedzisa kumisikidza" kana kumisikidza kwapera.
Sekupedzisira nhanho, iwe unofanirwa kudzima system yako. Kana iwe usingazive nezve iyo GNOME desktop nharaunda unogona kuzviita saizvozvo.
Bvisa Fedora yekugara nharaunda mushure mekuisirwa
Iwe unofanirwa kudzikisa manyore ISO faira rawakatakudza pamatanho ekutanga.
Bvisa Fedora ISO Kubva kuOptical Drive
Nguva inotevera paunotanga iyo chaiyo muchina naFedora, iwe unozokurudzirwa kugadzira iyo mushandisi account uye kumisikidza password yako yeFedora Linux.
Shandisa VirtualBox muenzi zvinowedzerwa zvezvimwe zvinowedzerwa se clipboard yekugovana, kugovera folda nezvimwe
Guest Kuwedzera zvakagadzirirwa kuiswa mukati memuchina wekumisikidza posvo yekumisikidza sisitimu inoshanda sisitimu. Izvo zvine madhiraivha edhisheni uye mashandisirwo esisitimu ayo anokwenenzvera iyo yevaeni inoshanda sisitimu yekuita zvirinani mashandisirwo uye kushandiswa.
Iyo Guest Inowedzera ISO faira yakaiswa seyakajeka CD-ROM kuitira kuti iiswe.
Iyi ndiyo nzira yakatwasuka. Simply tinya pamidziyo tebhu uye tinya pa "Isa Guest Kuwedzera CD mufananidzo"
Iwe unozokurudzirwa kurodha muenzi wekuwedzera mufananidzo, kana nekukurumidza tinya paDownload.
Isa VirtualBox Guest Kuwedzera
Pane imwe nguva iwe unozofanirwa kufambisa zvimwe zvirimo pakati peako chaiwo muchina uye iyo Yekushandisa sisitimu. Iyo yakagovaniswa clipboard / dhonza uye inodonha rutsigiro inokutendera iwe kuteedzera zvinhu papuratifomu imwe uye unama pane imwe.
Kugonesa chimiro ichi, sarudza Settings pane peji reimba reVirtualBox uye uteedzere rairo senge pazasi. Ini ndinowana iyo Bidirectional sarudzo yakanyanya nyore.
Bvumira clipboard kugovana pakati pevashanyi neyakagamuchirwa masisitimu
Kune maviri marudzi ezvikamu:
Zvikamu zvechigarire, izvo zvinochengetedzwa neiyo Virtual Mashini maseteni.
Zvikamu zvenguva pfupi, izvo zvinonyangarika kana Virtual Machine yabviswa. Izvi zvinogona kugadzirwa uchishandisa bhokisi rekutarisa mu VirtualBox Manager.
Mune ino dzidzo, ini ndichagadzira yakasarudzika yakagovaniswa dhairekitori. Mune iyo VM marongero wedzera iyo inomiririra system dhairekitori iwe yaunoda kugovera uye sarudza zita raunoda kuoneka paVM yako.
Nguva inotevera paunotanga chaiwo muchina, dhairekitori rinofanira kuoneka senge network drive.
Nani vhidhiyo rutsigiro
Ipo iyo yakajeka kadhi yemifananidzo iyo Oracle VirtualBox inopa zvese zvakakosha maficha, echinyakare mavhidhiyo madhiraivha ayo akaisirwa neGuest Additions anokupa iwe yakawedzera yepamusoro uye isiri-akajairwa mamodhi modhi, pamwe nekukurumidza vhidhiyo kuita.
Uchishandisa Guest Kuwedzeredzwa, iyo muyenzi OS resolution ichaita musimba musimba paunenge uchigadzirisa iyo VirtualBox hwindo pakombuta yako.
Chekupedzisira, Guest Kuwedzeredzwa kunogona kutora mukana wekombuta yako yemifananidzo kadhi. Kana iwe uri gamer kana uchishandisa software yekugadzira muWM, izvi zvinoita mutsauko mukuru.
USB uye Network Zvishandiso kugovana
NeVirtualBox, vashandisi vane kugona kushandisa yakazara-inoshanda inoshanda sisitimu, pasina kuita setup pane akasiyana Hardware. Nekudaro, kugovera USB uye network zvishandiso pakati peMugadziri nemuchina wevaenzi haina kutwasuka sezvazvinofanira kuve
Kuti uwane zvishandiso zve USB, uchafanira kuisa iyo VirtualBox yekuwedzera pack.
Isa VirtualBox Extensions pack
Izvi ndezve Linux chete nekuti ndiri kushandisa zvese izvi muLinux.
Kuti VirtualBox ive nekuwana kune USB subsystem, mushandisi (pane inomiririra system) achimhanya VirtualBox anofanirwa kunge ari weboka revboxuser. Kuti uite izvi, vhura chinongedzo uye ubudise unotevera kuraira:
Paunenge iwe uchimhanyisa iwo kuraira, iwe unofanirwa kubuda kunze uye upinde mukati mukati, kana kutangazve yako inomiririra muchina.
Padanho rino, plug mune yako USB tsvimbo uye kuburikidza neyako VM marongero iwe unofanirwa kuwana uye kuwedzera iyo svikiro sezvakaratidzwa pamuenzaniso.
Yako USB ichave inowanikwa nguva inotevera paunotanga yako chaiyo muchina.
Bonus Tip: Sevha uye kutumira kunze Virtual Machine kuti iwe ugone kuishandisa gare gare pane chero system
Ungangoda kushandisa yako chaiyo muchina kune imwe komputa kana inguva yekuvaka muchina mutsva uye unofanirwa kuchengeta yako chaiyo muchina sezvazviri. Iwe unogona nyore kutumira yako yazvino kumisikidza uye kuendesa iyo kune mumwe muchina pane mashoma mashoma matanho.
Pane iyo VirtualBox imba yepaneru, tinya pane faira uye zvekushandisa kunze kwenyika. Kana iwe uchida mapfupi ekhibhodi, unogona kungobaya Ctrl + E.
Sarudza iyo chaiyo muchina iwe yaunoda kuendesa kunze uye tinya pane inotevera.
Sarudzo yeFomati inoda kutariswa. Pane nzira nhatu dzakasiyana dze Open Openization Fomati 0.9, 1.0 uye 2.0, inogona kuve ovf kana ova yekuwedzera.
Nekuwedzera kweovf, mafaera akati wandei achanyorwa zvakasiyana, zvichienzaniswa neova yekuwedzera, iyo inosanganisa mafaera ese kuita Open Openization Fomati dura.
Iyo yakasarudzika fomati, Vhura Virtualization Fomati 1.0, inofanira kunge yakanaka.
Kuti upedze maitiro, tinya zvinotevera uye pane rinotevera dialog bhokisi tinya kunze.
Nekushandisa muchina chaiwo haugone kuyedza chete sisitimu yekushandisa asi shandisa sisitimu inoshanda zvakakwana, zvakaenzana zvakaenzana nemuchina wepanyama. Mazuva ano, Hardware yave nesimba rakanyanya uye inodhura zvekuti simba rayo zhinji harisi kushandiswa.
Kuburikidza nehunyanzvi hwekuona tekinoroji, unogona kushandisa izvo zvakapambwa zviwanikwa. Iko kudiwa kwemashini epanyama kwakaderedzwa, uye nekudaro iko kushandiswa kwesimba kushoma. Iwe unogona kusevha mari zvese kubva kune Hardware uye kudzikisa kumhanya mitengo.
Padanho rakakura, sevha yekuona yakawanda yezvinodiwa zvekutanga pane zano repamberi.
Ndinovimba wawana iyi dzidziso inobatsira pakuisa Fedora Linux muVirtualBox. Kana iwe ukatarisana nechero nyaya, ndokumbira undizivise mune zvakataurwa.
Maitiro Ekuti Dual Boot Fedora uye Windows
Fedora 30 Workstation ongororo - Yakapusa, nekukurumidza uye buggier
Fedora Vs Red Hat: Ndeipi Linux Distro Iwe yaunofanira kushandisa uye Nei?